Mudanayaasha Barlamaanka Oo Maanta Ansixiyey Miisaaniyada Dowlada Ee Sanadka 2015 | Radio Baidoa
Guriga Barnaamijyada Mudanayaasha Barlamaanka Oo Maanta Ansixiyey Miisaaniyada Dowlada Ee Sanadka 2015
Mudanayaasha Barlamaanka Oo Maanta Ansixiyey Miisaaniyada Dowlada Ee Sanadka 2015
Kulan ay mudanayaasha baarlamanku maanta ku yeesheen xaruntooda golaha shacabka ayay ku ansixiyeen miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2015-ka, kaddib dib u eegis lagu sameeyay miisaamiyadda dowladda ee sanadkan.
Dib u eegista miisaaniyadda dowladda Soomaaliya ee Sanadka 2015-ka ayaa waxaa Baarlamaanka Soomaaliya u soo gudbiyey Wasaarada Maaliyadda kadib markii uu dib u dhac ku yimid miisaniyadii 2015-ka oo ay horay u meel mareyeen golaha shacabka.
Xoghayaha Guddiga maaliyadda ee barlamaanka oo kulanka golaha shacabka ka hadlay ayaa sharaxay dib u eegista lagu sameeyay miisaniyadda dalka iyo inta laga dhimay misaaniyaaddi hore. Isagoo sheegay in dhimista lagu sameeyey miisaniyadda aysan saamayn doonin musharaadka ciidanka iyo shaqaalaha rayidka dowladda.
Wasiirka maaliyadda Mudane Maxamed Adan Ibraahim “Fergeeti” ayaa tilmamay in dib u eegista miisaniyadda lagu sameeyay inta badan talooyinkii ay soo jeediyen xildhibaanada barlaamaanku markii la horkeenay bishii hore.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Sh.Cismaan Jawaari ayaa kula dardaarmay guddiga Arrimaha bulshada Barlamaanka Soomaaliya in ay baaritaano ku soo sameeyaan tiradda macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada dowladda sida ay codsatay ayuu yiri wasaaradda maaliyadda.